Fihla i-xR ibonakaliswe kwiChannel 5 Umboniso weGajethi | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB BONISA LIVE Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » Fihla i-xR ibonakalisiwe kwiChannel 5's Umboniso weGajethi
Ngexesha lase-UK ngoLwesihlanu ebusuku, ukuguqula ibonise itekhnoloji ye-xR ephumeleleyo kwi Isiteshi 5 Umboniso weGajethi, ibalaselisa ubunyani obandisiweyo unikezela ngokubonakalayo imveliso kunye nokusebenza kwindawo yexesha lokwenyani yevidiyo ngokungafaniyo nenye - ukuxhobisa abavelisi ukuba bahambise amava angalibalekiyo kunye nokuvumela iimveliso kunye namagcisa ukuba aqhubeke nokunxibelelana nabaphulaphuli babo kude.
Yaziswa ngo-2004, i-Gadget Show yenye yezona nkqubo ze-UK zisebenza ixesha elide, zibonelela ngokufikelela ngokukodwa kubuchwephesha betekhnoloji yakutshanje kunye nezinto ezintsha ezizayo. Umbonisi uGeorgie Barrat waphathwa njengamava e-xR, ethatha indawo yokuzifihla eLondon HQ kunye nokufota uthotho lodliwanondlebe lomntu ngamnye malunga nemvelaphi kunye namabhongo etekhnoloji yeXR kunye neqela elilawulayo lobunkokeli, kubandakanya ne-CSO Tom Rockhill kunye ne-CTO U-Ed Plowman.
Ukufumana ukwehla kwi-xR kwiqela lokuzifihla, Umboniso weGajethi uthathe ababukeli ngokufihla ukuhamba komsebenzi, okubonelela ngenkqubo esembindini yokulawula kunye nokuhambisa imeko ebonakalayo, ebonakalayo kuzo zombini izikrini zomzimba ezisetiweyo kunye nomxholo obonakalayo ngokupheleleyo kwikhamera. Injini yokufihla ilungelelanisa ukulandela umkhondo wekhamera, ukunikezelwa komxholo okwenyani, ukuboniswa kwimiboniso ebonakalayo (iiphaneli ze-LED), ukubanjwa kokusebenza, ukwakhiwa kwakhona komhlaba kunye nokwakhiwa okwethutyana, ukwakheka kunye nemveliso yokugqibela kwindawo enye.
Umboniso weGajethi uphonononge iindlela zokuzifihla eziqhubeka ukwazisa ngokusa okutsha kwemveliso ebonakalayo ngezi zinto zintsha. Imfuno yokuveliswa kwemveliso ekude kunye neyona nto ilandelayo emva kokurhoxiswa kweziganeko ezibukhoma ibone ukuthathwa okukhulu kwabathengi beprofayile ephezulu eyenza inyani edibeneyo. Njengempendulo, ukuzifihla kutyale imali eninzi kuphuhliso lwetekhnoloji ye-xR, ukuyenza ukuba ifikelele kwinqanaba lokuvuthwa ukubonelela ngeendlela ezingapheliyo kwimveliso ezinokufikelela okulinganiselweyo kubasebenzi kunye nabasebenzi.
Umboniso weGajethi wawuthatyathwa unqumla idolophu ukuya kufumana intlanganiso yokuwela indawo efihla uMboneleli weSisombululo esiQinisekisiweyo UkuKhanya okuMhlophe ISmartStage kwiMyuziyam yaseLondon yezeNzululwazi. Sebenzisa igalelo elininzi kwifowuni yeZoom kunye nomzekelo 'wokuthumela ngocingo' kwindwendwe ukuya eqongeni, uMlawuli oMhlophe weSisombululo seTekhnoloji yobuGcisa u-Andy Hook uthathe uMboniso weGadget ngokusebenzisa izinto ezenza ukuba i-xR ingenakulinganiswa ngenene. UHook uthe, “Kwakumnandi ukubona i-xR kunye nesisombululo sethu se-SmartStage sifumana impendulo enkulu evela kumajelo eendaba. Yayilukhetho lwendalo kuthi ukuba sisebenze ngokuzifihla xa sasiqala uhambo lwethu lwe-xR ngaphezulu kweminyaka emithathu edlulileyo kwaye kuyamangalisa ukubona izixhobo esibancede ukuba baziphuhlise ukusukela ngoko zisetyenziswa kuluhlu olubanzi lwamashishini.
Ngaphezulu kwama-80 xR amanqanaba akhiwe kumazwe angama-30 nangaphezulu kucwangcisiwe, njengoko ishishini liqala ukuqaphela ukubaluleka okukhulayo kokuntywila kodwa kude kwimveliso yexesha lokwenyani. La manqanaba abe negalelo ekukhokeleni i-xR kwizicelo ezahlukeneyo, ukusuka kwimisitho yosasazo enje ngee-2020 MTV Video Music Awards kunye neMelika's Got Talent, umculo ophilayo ovela kubaculi abanjengoBillie Eilish, Katy Perry kunye noAlicia Keys, umboniso wenkampani weSAP kunye neLenovo , kunye nemveliso ebonakalayo esekwe kwezinye zeenkampani eziphambili zemveliso yefilimu.
The Iqela lokuzifihla libeke ubungqina balo beminqweno yetekhnoloji yeXR kunye noMdlalo weGajethi. U-Ed Plowman CTO uthe, "Iinjongo zethu kukuqhubeka nokudibanisa imeko ebonakalayo kunye ebonakalayo yemveliso yokuhamba komsebenzi, ke ezi zinto zimbini azinamthungo kwiqela lemveliso. Umbono wethu ngekamva le-xR kukonyusa inkululeko yokuyila imveliso ebonakalayo ukuya kwinqanaba elifanayo lemveliso ebonakalayo, ukuhambisa ulawulo ngakumbi kuMlawuli weFoto nokubenza bakwazi ukuqonda umbono wabo ngefoto.
“Kunyaka ongalibalekiyo xa umhlaba wawungenandlela zimbi ngaphandle kokufumana isisombululo ngenxa yefuthe lobhubhane, ukufihla i-xR kuyaqhubeka nokusuka kumandla kuye kumandla, kunika amandla iminyhadala, intsebenzo kunye nemveliso, kukonwatyiswa nakwizicwangciso zobumbano iglobhu. Sasonwabile ukusingatha uMboniso weGajethi kwindawo yethu yaseLondon naseWhite Light's SmartStage, sinika isizwe umbono opheleleyo wendlela itekhnoloji ye-xR itshintsha ngayo ukuhamba komsebenzi, kwaye ngoku iyafikeleleka kubo bonke, utshilo uCS, uTom Rockhill .
Unokubukela isiqendu kwi-YouTube Channel Channel Apha.
Bhukisha idemo okanye uthethe neqela lethu usebenzisa le khonkco.
Fumanisa ukumiliselwa kwe-teknoloji ye-xR yamva nje Apha.
Iqonga lobuchwephesha lokuzifihla liyenza ubugcisa bokuyila nobugcisa ukucinga, ukwenza kunye nokuhambisa amava abonakalayo aphilayo abonakalayo kwinqanaba eliphezulu.
Ukudibanisa isoftware ye-3D yexesha lokwenyani kunye nokusebenza okuphezulu kunye nezixhobo ezomeleleyo, ukufihla kwenza ukuhanjiswa kweeprojekthi ezinobunzima kwinqanaba kunye nokuzithemba. Ukuwongwa kokusebenza kwayo okutsha okuphumeleleyo okwandisiweyo (xR) kukuxhobisa iimveliso eziphambili zehlabathi, amagcisa kunye nezindlu zemveliso ukuzisa ebomini amava okuntywila akhuthazayo kunye nokubandakanya abaphulaphuli abakude kuyo yonke indawo.
Fihla i-xR sele inike amandla imveliso yexesha lokwenyani yeemvumi zomculo ezinje ngoKaty Perry kunye neBlack Eyed Peas, amashishini amashishini afana ne-SAP, amaziko emfundo afana neDyunivesithi yaseMichigan, asasaza iinkqubo zeTV ezinje ngeMVV Video Music Awards kunye neMelika's Got Talent, ezentengiso Iimpawu ezinje ngoAsahi naphantsi kweArmor kunye namanye amava amaninzi kumazwe angaphezu kwama-20.
Ngonxibelelwano lwamaqabane olwandayo lwehlabathi kunye nokusebenza kunye nabayili abanetalente kwihlabathi kunye namaqela obuchwephesha kwiminyhadala ebukhoma, usasazo lweTV, iifilimu, ukhenketho lwekonsathi, indawo yemidlalo yeqonga, ufakelo olusisigxina kunye nemisitho yemibutho kunye neyolonwabo, ukufihla kwakha isizukulwana esilandelayo sezixhobo zokusebenzisana ukunceda amagcisa kunye neetekhnoloji baqonde umbono wabo.
Previous: Iividiyo zeMatrox ziQinisekisa iiNkqubo zePortwell Rackmount zoSetyenziso lweDonga leVidiyo
next: I-NDI® ityhila i-NDI® ekulindelwe kakhulu | Ikhamera yeHX yaBasebenzisi be-Android